हुवावेलाई अमेरिकी उल्झन- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर ६, २०७६ पर्वत पोर्तेल
गाउँ–घरमा दैनिक कामकाजमा प्रयोग हुन्थे ढिकी–जाँतो, हलो–कोदालोहरू  । अहिले गाउँमै यस्ता साधन फेला पार्न गाह्रो छ  ।
झन् सहर–बजारको त कुरै छाडौ । तर, सुन्दै अनौठो लाग्ने, गाउँ–घर र नेपाली समाजवाटै लोप हुदै गएका यिनै ढिकी–जाँतो, हलो–कोदालो, पिर्का–गुन्द्रीहरू फेला पार्न सकिन्छ, झापा विर्तामोडको प्राचीन रेष्टुराँमा ।
परिसरभित्र पस्ने वित्तिकै पुराना अर्थात प्राचीन सामाग्रीको संग्रह देख्दा लाग्छ, यो संग्रहालय पो हो कि ! तर, झुक्किनु पर्दैन, यो रेष्टुराँ हो । पुराना कृषि सामग्री त छदैछ, रेष्टुराँको माहोल नै अर्कै लाग्छ । खासमा विर्तामोड प्रहरी कार्यालय पछाडीको यो जमीनमा स्थानीय युवा पाल्देन शेर्पाले सुधार गृह संचालनको योजना बुन्दै थिए । त्यही वेला भेटिए, अर्जुनधाराका नवीन उप्रेती (सिद्धार्थ) । उनी पनि व्यवसाय शुरु गर्ने तरखरमा थिए । तर, झापाकै ठूलो व्यापारिक केन्द्रमा अरु भन्दा फरक ढंगको व्यवसाय के गर्न सकिएला ? भन्ने सोच यिनमा थियो ।
यो जमीन देखेपछि नवीन लोभिए । तत्काल उनमा एउटा योजना फुर्‍यो । यहाँ पुराना शैलीको होटल वनाउँदा कस्तो होला ? योजना पाल्देनलाई सुनाए । पाल्देनलाई पनि उनको योजना मन पर्‍यो । अन्ततः सुधार गृह संचालन गर्ने पाल्देनको योजनामा वदलाव आयो । नवीन र पाल्देनको योजना सुनेपछि अर्का युवा चित्र राई टिममा जोडिए । तीन जनाको करिव ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा प्राचीन रेस्टुराँ जन्मियो । ‘फेन्सी टाइपको रेस्टुराँको लगानी अलि महँगो होला भन्ठानेर यस्तो सुरु गर्ने सोच्यौं,’ नवीनले अनुभव साटे, ‘तर, बनाउँदै जाँदा फेन्सीभन्दा पनि महँगो भइदियो ।’
पुराना तस्बिरलगायतका वस्तुहरू जुटाउने र संग्रह गर्ने नवीनको पहिल्यैदेखिको बानी थियो । त्यसैले रेस्टुराँका लागि यी सामग्री जुटाउन उनलाई गाह्रो भएन । ‘अझै धेरै पुराना कुरा जुटाउँदै छौं,’ नवीनले भने, ‘पहिला त यो तीन कट्ठा जमिन नै ठूलो होला जस्तो भा’थ्यो । अहिले जमिनले नपुग्ला जस्तो भो ।’ रेस्टुराँको सजावटमा मात्रै हैन, खानपिनमा पनि भिन्न स्वाद पस्किने प्रयत्न गरेको छ, प्राचीनले ।
नवीन एसएलसी सक्नेबित्तिकै इन्जिनियरिङ पढ्न काठमाडौं उक्लिएका थिए । इन्जिनियर बन्ने सपना छाडेर उनी मिडियातिर लागे । विज्ञापन एजेन्सीमा पनि लामै समय काम गरे । त्यो बेला माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । चन्दाका लागि धम्क्याउने क्रम जारी थियो । द्वन्द्वका कारण व्यवसाय थेग्न सक्ने अवस्था भएन । अन्ततः २००५ तिरै उनी विदेशिए । श्रीलंका, बैंकक, बेलायत र फ्रान्सजस्ता मुलुकमा उनले करिब ६ वर्ष बिताएर २०११ मा नेपाल फर्किए ।
पुरानो बिर्तामोडमा फर्किएका उनी यो पूर्वको सहरमा नयाँ परिवर्तन देखेर चकित भए । यिनले यहाँ असरल्ल देखे अवसरहरू । विदेश फर्किने गरी आएका उनलाई फर्किन मन लागेन । ‘बिर्तामोडको परिवर्तनले मेरो सोच नै परिवर्तन गरिदियो,’ नवीन भन्छन्, ‘विदेशमा गर्ने काम यतै गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्यो ।’
विदेश नफर्किने भएपछि नवीनले २००५ तिर अलपत्र पारेर हिँडेको ‘माइलाइफ’ नामक पत्रिकाको पुनः प्रकाशन सुरु गरे, त्यो पनि अंग्रेजी संस्करणमा । केही समय साप्ताहिक रूपमा प्रकाशित भयो । तर, अंग्रेजी पत्रिकाको सानो बजारसामु उनको केही लागेन । पत्रिका निकाल्नु रहर जस्तो मात्रै भइदियो । पत्रिका निस्किन छाडेपछि यिनी लगभग बेरोजगार बने । तर सिर्जनात्मक सोचका कारण यिनले केही न केही भने गरी नै रहे । बिर्तामोडमा पुस्तकालय र आर्ट ग्यालरीको परिकल्पना गरे । त्यसमा पनि असफल भए ।
केही समय लगभग निराशाको अवस्थामा गुज्रिएका नवीनको मुहारमा अहिलेचाहिँ चमक देखिन थालेको छ । किनकि आफूले सोचे मुताविकको रेस्टुराँ सञ्चालन गर्न पाएका छन् । उनले रेस्टुराँ परिसरमै आर्ट ग्यालेरीसमेत सुरु गरेका छन् । लाइब्रेरीको तयारी गर्दैछन् । ‘रेस्टुराँमा आउनेहरू खान मात्रै आउँदैनन्, घुम्न, पढ्न र रमाउन पनि आउँछन्,’ उनले थपे, ‘उपभोक्ताका यी तमाम माग पूरा गर्ने ध्याउन्नमा हाम्रो सिंगो टिम लागेको छ ।’
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १०:४५